कर्णाली सरकारले ७ महिनामा ६० अंक, विज्ञ समूहले गराउँछ क्रमभंग ! – Vision Khabar
कर्णाली सरकारले ७ महिनामा ६० अंक, विज्ञ समूहले गराउँछ क्रमभंग !
। ९ आश्विन २०७५, मंगलवार १६:०५ मा प्रकाशित
गणेशकञ्चन भारती सुर्खेत । देशैभर विभिन्न सरकारको अवस्थालाई दाजेर हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेश सरकार सक्रियता, कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रियामा अगाडि नै देखिन्छ । सरकारले कर्णालीमा गरेका काममा अहिले पनि एउटा नागरिकका हिसाबले सयमा कम्तिमा ६० नम्बर दिन सकिन्छ । प्रदेशको अहिलेको काम र निर्णयका आधारमा ६० अंकलाई राम्रै अंक मान्न सकिन्छ ।